I-Caddy Corner inobhavu oshisayo ngaphandle nje kwedolobha
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Emma
ICaddy Corner iyindlu yesikole yama-1920s eyaguqulwa yaba yindlu yasepulazini yesimanje. Jabulela umuzwa wezwe ngenkathi ungaphezu kwekhilomitha ukusuka kukho konke okunikezwa yi-French Lick ne-West Baden. Balekela kubhavu wethu oshisayo ngemuva kosuku edolobheni, futhi uvumele izinkathazo zakho zihambe. Nethezeka efenisha yethu eyenziwe nge-upholstered eyenziwe eMelika, dla etafuleni lethu elenziwe ingcweti yendawo, futhi uthole ukozela komatilasi bethu abaphezulu be-euro. Uma uthanda ukupheka, ikhishi lethu ligcwele, njengekhaya.
Ungase uzwe ama-turkeys, ubone izinyamazane, nezinhlobo eziningi zezinyoni ngenkathi uhlala nathi. Hlala kuvulandi ongaphambili ukuze uthole ikhofi noma wenze izinkumbulo endaweni yethu yomlilo. I-driveway yethu izothatha kalula izimoto ezi-2-3 kanye/noma izikebhe eziningi. Izivakashi ziyakwazi ukungena ngemvume ku-akhawunti yazo ye-Hulu noma ye-Netflix. Sihlinzeka ngephakheji ye-Sling Blue TV. Ukuhambo olufushane, lwemizuzu eyi-10 ukuya ePatoka Lake.
Izinga lokushisa lamanzi obhavu ashisayo kungenzeka ukuthi lisekhona kunqubo yokushisisa lapho ufika. Lokhu kungenxa yokuthi sishintsha amanzi ethu kabhavu ashisayo ngaphambi kokungena ngakunye futhi uma othile ephuma ngosuku lokufika kwakho, kuthatha amahora ambalwa ukukhipha, ukuhlanza, ukugcwalisa, nokushisa. Sihlinzeka ngamathawula obhavu ashisayo agcinwe egumbini elondolo. Izinkuni zomgodi womlilo manje sezifakiwe ekubhukheni kwakho.
4.97(120 okushiwo abanye)
I-French Lick igcwele umlando futhi isasebenza njengakuqala. Indawo yethu ingaphandle kwedolobha ukuze ube nendawo eningi uwedwa ngenkathi useduze nayo yonke into. Ukunambitha iwayini e-French Lick Winery kungaphansi kwamamayela angu-2. Isitolo sika-ayisikhilimu sase-French Licks ngaphakathi kwendawo yokungcebeleka siyindawo eshisayo ka-ayisikhilimu. Kukhona i-pizzeria ne-bowling alley ezingeni eliphansi le-resort. I-Wilstem Wildlife Park izogcina izingane kanye nezingane enhliziyweni zithokozile, futhi iqhele ngemizuzu eyi-10 nje.
Izivakashi zizokwazi ukufinyelela umsingathi ngombhalo ngesikhathi sokuhlala kwazo.